Izimpephe: Ukuvela Kwezobuchwepheshe Bekhulu Elidala | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 10, 2015 Douglas Karr
Ama-Flipbook angenye yezindlela zokuqala zalokho namuhla okubhekiselwa kukho i-multimedia exhumanayo futhi babenelungelo lobunikazi e-United States ngo-1882! Thumela Izidudla ividiyo nelogo, futhi bazosiza ukudala ubuciko obuhle bokusebenzisana abakubizayo ukumaketha okunikwa isithupha. I-oda elincane ngama-flipbook ayizi-2,500 XNUMX - kepha iyiphi indlela engcono yokubukisa ngomkhiqizo, insiza noma umkhiqizo wakho. Ama-Flipbook enza izincwajana ezinhle zomcimbi ezisebenzisanayo noma okunikezwayo kombukiso.
Noma ngabe ama-pistachio, ama-Jeeps, amakhamera noma izimbiza zetiye… kunokuthile okupholile futhi okuhlukile ngobuchwepheshe be-flipbook ukuthola incazelo ebonakalayo kucezu lwemidiya olusebenzisanayo umuntu angahamba nalo. Akunasidingo sokufaka i-plugin, ukulanda, noma ukufaka… vele ulungise isithupha sakho uhambe!
Tags: incwadi flipamaphepha okufundaiziqhwagaumlandoi-multimedia exhumanayo